ဒီမှာ START: Porn-သွေးဆောင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ် - Porn တွင်သင့်ဦးနှောက်
ဒီမှာ START: Porn-သွေးဆောင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်
YBOP သင်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာများ, အစားအသောက်ချို့တဲ့, ဟော်မုန်းမညီမျှမှု, ဒါမှမဟုတ်အော်ဂဲနစ်အကြောင်းတရားများထွက်အုပ်ချုပ်ဖို့အရည်အချင်းဆေးဘက်ဆိုင်ရာပရော်ဖက်ရှင်နယ်တွေ့မြင်အကြံပြုထားသည်။
YBOP အားဖြင့် porn-သွေးဆောင် Erectile အလုပ်မဖြစ် (2014),
သင်မရှိသေးပါက Gabe Deem မှဤဗီဒီယိုကိုကြည့်ပါ - ပြန်ဖွင့်၏အခြေခံ
ဗွီဒီယို - နောဧသည်ဘုရားကျောင်းအားဖြင့် PIED ပြန်လည်ထူထောင်ရေး၏မရှိမဖြစ်အခြေခံ
ဒီ 13 မိနစ်ဗီဒီယိုအားဘလော့ဂ် Watch: porn-သွေးဆောင် ED Reboot အကြံဉာဏ် ဗီလော့ဂ်: ဂါယူဆပါသည် (9 လအတွင်းတစ်ဦးတည်းငါ့ကိုယ်ပိုင်ထိတွေ့နေဖြင့်တစ်ဦးစိုက်ထူရဖို့လိင်, 15 လအတွင်းရှိသည်)
၃ မိနစ်ဗီဒီယို - "Porn ကငါ့ Erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုစေခဲ့သလား စမ်းသပ်ကြည့်ပါ!” (Gabe Deem မှ).
ကျွမ်းကျင်သူများစွာကဤအတော်လေးမကြာသေးမီကဖြစ်ရပ်ကိုအသိအမှတ်ပြုကြသည်။ ကြည့်ပါ - PIED အပါအဝင် porn-သွေးဆောင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်အသိအမှတ်မပြုတဲ့သူကျွမ်းကျင်သူများ, ဆောင်းပါးများ၊ ဘလော့ဂ်ပို့စ်များနှင့်ရေဒီယိုနှင့်တီဗွီအင်တာဗျူးများပါ ၀ င်သည်။
သက်တူရွယ်တူ - ပြန်လည်သုံးသပ်စာပေပြန်လည်သုံးသပ် - အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်စေသလဲ? လက်တွေ့အစီရင်ခံစာများ (2016) နဲ့တစ်ဦးကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း
သငျသညျ erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုဖွံ့ဖြိုးဆဲသူတစ်ဦးညစ်ညမ်းအသုံးပြုသူဖြစ်ပါသလား နှစ်ခုအကြားဆက်သွယ်မှုရှိကောင်းရှိနိုင်ပါသည်။ ကျွန်တော်ပထမဦးဆုံးအညစ်ညမ်း-သွေးဆောင် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုကနေပြန်လည်ယောက်ျား chronicling စတင်ခဲ့သည့်အခါကျွန်တော်ပြန်လည်နာလန်ထူနှစ်ခုအဓိကပုံစံများကိုမျက်မြင်:
အနည်းငယ်ယောက်ျားတစ်ဦးအတော်လေးအချိန်တိုအတွင်းပြန် bounce: 2-3 ရက်သတ္တပတ်တွေအကြောင်း။ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သူတို့ရဲ့ ED အွန်လိုင်း porn ဖို့လေ့တိုးမြှင့်ခြင်းဖြင့်လိုက်ပါသွားပျော့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအေးစက်ကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင် (porn ကမီးလောင်ရာ) တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေ၏မြင့်မားတဲ့အခန်းကဏ္ဍမှပါဝင်ခဲ့သည်။
သာ 2-3 လအတွင်းလိုအပ်ကျွန်တော်ကြုံတွေ့ယောက်ျားတွေ၏အများစုသည် အပြည့်အဝ ပြန်လည်ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။
၂၀၁၁ - ၂၀၁၂ လောက်မှာအခြေအနေတွေစတင်ပြောင်းလဲလာတယ်။ အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုကို သုံး၍ ကြီးပြင်းလာခဲ့သည့်အသက် ၂၀ အရွယ်အမျိုးသားများကအပြည့်အဝပြန်လည်ထူထောင်ရန်လပေါင်းများစွာလိုအပ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။ အချို့သည်ပုံမှန် Erectile လည်ပတ်မှုပြန်လည်ရရှိရန်တစ်နှစ်ခန့်လိုအပ်ခဲ့သည်။ အနည်းငယ်ပိုပင်လိုအပ်သည်။
ကျနော်တို့ကြောင်းသံသယရှိ porn ပြွန်ဆိုဒ်များဆိုက်ရောက် နှောင်းပိုင်းတွင် 2006 အတွက်, ဂိမ်း changer ခဲ့ကြပေမည်။ လုလင်တို့သည်ဖိုရမ်များအပေါ်သတင်းပို့ခဲ့ကြသည်ဘယ်မည်သောအကောင်နှင့် align လုပ်ဖို့, 2010 ကတည်းကငယ်ရွယ်အထီးလိင်အကဲဖြတ်လေ့လာမှုများ အနိမ့်လိင်စိတ်: erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု၏သမိုင်းဝင်အဆင့်အသစ်တစ်ခုဘေး၏တုန်လှုပ်နှုန်းထားများအစီရင်ခံတင်ပြကြပါပြီ။
အများဆုံးရှည်လျားသော-reboot"အပါအဝင်ဆုတ်ခွာလက္ခဏာတွေအမျိုးမျိုးတွေ့ကြုံခံစား ကွော flatline ။ ဤအုပ်စုမှအမျိုးသားများကြုံတွေ့ရဖွယ်ရှိသည် စွဲ-related အပြောင်းအလဲများ ထို ဦး နှောက်၏စိုက်ထူမှုစင်တာများကိုနှိုးဆွပေးသည်။ သံသယတစ်ခုမှမရှိဘဲ, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအေးစက် PIED တာဝန်ရှိသည်ဒုတိယယန္တရားအထူးသဖြင့်ဖြစ်ပါသည် ငယ်ရွယ်ယောက်ျားတွေအကြား အဘယ်သူသည် အင်တာနက်ကညစ်ညမ်းစောစောစတင်.
အတော်များများကယောက်ျားကြောင့်မယုံကြည်နိုင်ပါတယ် အင်တာနက်ကညစ်ညမ်းသူတို့ရဲ့ ED စေခဲ့ပါတယ်- သူတို့အသုံးပြုခြင်းကိုရပ်တန့်ပြီးပြန်လည်ကောင်းမွန်လာသည်အထိ ယောက်ျားများသည်လိင်ဆက်ဆံခြင်းဖြင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်းအားဖြင့် ED ကိုစိတ်ပူရခြင်း၊ testosterone ဟော်မုန်းနိမ့်ခြင်း၊ လူတို့၏“ အမျိုးအစား” မဟုတ်သောသို့မဟုတ်ဆေးလိပ်သောက်ခြင်း၊ အကယ်၍ သင်သည်အသက် ၄၀ မပြည့်သေးသော်လည်းသတ်သတ်မှတ်မှတ်ဆေးဝါးများမသောက်ရသေးသော၊ ပြင်းထန်သောဆေးဘက်ဆိုင်ရာသို့မဟုတ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအခြေအနေမရှိလျှင်သင်၏ copulatory ED သည်စွမ်းဆောင်ရည်ဆိုင်ရာစိုးရိမ်ပူပန်မှု (သို့) အင်တာနက်ပေါ်မှညစ်ညမ်းခြင်းသို့မဟုတ်နှစ်ခုလုံးပေါင်းစပ်ခြင်းမှပေါ်ပေါက်လာသည်။
မှတ်ချက်: ကျနော်တို့အသုံးအနှုန်းကိုသုံးပါ porn-သွေးဆောင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှု porn-related စွမ်းဆောင်ရည်ပြဿနာများ (အောက်ပါစာရင်းတွင်ကြည့်ပါ) ကိုယ့်ပညာရေးထက် ပို. ပတ်ဝိုင်းနေသောကြောင့်။ သို့သျောလညျး porn-သွေးဆောင် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု အဆိုပါရုပ်ဆိုးအတိုကောက်အဖြစ် PIED နှင့်အတူအသုံးအများဆုံးသက်တမ်းအဖြစ်ပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်။
လျှင်အံ့သြ သင့်ရဲ့ ပြဿနာ porn-ဆက်စပ်ပါသလဲ
ဖိုရမ်အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်: လူတွေဟာ PIED ကိုဘယ်လိုသတိမထားမိကြတာလဲ။ ညစ်ညမ်းဝက်ဘ်ဆိုက်တိုင်း၏စာမျက်နှာတိုင်းတွင် boner pill များအတွက်ကြော်ငြာများရှိသည်။ ညစ်ညမ်းသောကုမ္ပဏီသည်သင်၏ဒစ်ကိုချိုးဖျက်နိုင်သည့်နေရာတိုင်းတွင်သင်နှိပ်သည့်အခါတိုင်းအမြတ်အစွန်းရရှိသည်။ (သင်၏နစ်ခ်ကိုသင်ချိုးဖောက်နေကြောင်းသိရှိခြင်း၊ နေရာတကာရှိ boner pill ကြော်ငြာများအားလုံးသည်) ထို့နောက်သင်၏ boner pill ကိုနှိပ်ခြင်းမှလည်းအကျိုးရရှိသည်။ သင်၏အွန်လိုင်းစီးကရက်အမိန့်များကိုအကျိုးအမြတ်ယူစဉ်၊ နာတာရှည်အဆုပ်ရောဂါနှင့်အဆုတ်အစားထိုးကုသမှုများအတွက်ကြော်ငြာများရှိနေစဉ်ဖိလိပ္ပု Morris နှင့်ဆင်တူသည် သင့်ရဲ့ပျက်စီးအဆုတ်။
အကွံဉာဏျ၏ပထမဦးဆုံးနည်းနည်းဖို့ဖြစ်ပါတယ် အကောင်းတစ်ဦးဆရာဝန်ကိုတွေ့မြင် မည်သည့်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာမူမမှန်ထွက်အုပ်ချုပ်ဖို့။ သင်တို့သည်ဤမျှပွုပါပွီလျှင်ဤရိုးရှင်းသောစမ်းသပ်စမ်းပါ။ ဒါဟာအကြားခွဲခြားရန်ကူညီပေးပါမည် porn-သွေးဆောင် ED နှင့် စွမ်းဆောင်ရည်စိုးရိမ်စိတ်-သွေးဆောင် ED (အသုံးအများဆုံးရောဂါ):
တစ်ကြိမ်တွင်သင်အကြိုက်ဆုံး porn (သို့မဟုတ်ရိုးရိုးကတူဘာသတိရပါ) မှ masturbate ။
အခြားတွင်အဘယ်သူမျှမညစ်ညမ်း / ညစ်ညမ်းစိတ်ကူးယဉ်နှင့်အတူ masturbate ။ သငျသညျလိင်ဆက်ဆံမှုကာလအတွင်းတွေ့ကြုံခံစားမယ်လို့တူညီတဲ့အမြန်နှုန်းနှင့်ဖိအားဖြင့်သာ (အဘယ်သူမျှမစိတ်ကူးယဉ်) sensation မှ masturbating ကြိုးစားပါ။
တဦးတည်းနှင့်နှစ်ဦးကိုနှိုင်းယှဉ်ကြည့်ပါ: သင်၏စိုက်ထူ၏အရည်အသွေး, က (သင်လုပ်နိုင်လျှင်) ejaculate ယူခဲ့တဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ဦးကကျန်းမာလုလင်ကိုအဘယ်သူမျှမနှောင့်ရှက်အပြည့်အဝစိုက်ထူမရရှိစများနှင့်ညစ်ညမ်းသို့မဟုတ် porn စိတ်ကူးယဉ်စရာမလိုဘဲအော်ဂဇင်မှ masturbating ရှိသင့်.
သငျသညျ #1 အပေါ်တစ်ဦးသည်ခိုင်ခံ့ #2 အပေါ်စိုက်ထူပေမယ် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုရှိပါက, ထို့နောက်သင်ဖွယ်ရှိ porn-သွေးဆောင် ED ရှိသည်။
#2 ခိုင်မာတဲ့နှင့်အစိုင်အခဲဖြစ်ပါသည်, သို့သော်သင်အမှန်တကယ်မိတ်ဖက်နှင့်အတူဆင်းရဲဒုက္ခကိုခံရကြလျှင်, သငျသညျဖွယ်ရှိစိုးရိမ်စိတ်-သွေးဆောင် ED ရှိ
1 &2နှစ်ခုလုံးတွင်သင်၌ပြhaveနာရှိပါကသင်သည်ပြင်းထန်သောညစ်ညမ်းသောသွေးဆောင်မှု ED သို့မဟုတ်အော်ဂဲနစ်ပြproblemနာတစ်ခုရှိနိုင်သည်။ သံသယရှိကောင်းတစ်ဦးဆရာဝန်ကိုမြင်သောအခါ.
အထက်ပါစမ်းသပ်မှုစွမ်းဆောင်ရည်စိုးရိမ်စိတ်ကနေညစ်ညမ်း-သွေးဆောင် ED ခွဲခြားရန်အထောက်အကူဖြစ်စေသည်: သင်ဟာသင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်လက်နှင့်အတူစိုးရိမ်ပူပန်မှုရှိသည်မဟုတ်နိုင်ပါ။ သို့သော်၊ ၎င်းသည်အော်ဂဲနစ် ED (ဟော်မုန်းဆိုင်ရာ၊ ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ) နှင့်ပြင်းထန်သော porn-induced ED နှင့်အမြဲတမ်း ခွဲခြား၍ မရနိုင်ပါ။ porn-induced ED ရှိအမျိုးသားများသည် porn နှင့်ပင်စိုက်ထူခြင်းကိုမထိန်းသိမ်းနိုင်ပါ။ သင့်ရဲ့ ED ထိုကဲ့သို့သောလက်တွေ့စိတ်ကျရောဂါအဖြစ်ပြင်းထန်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာများကိုကနေပေါ်ပေါက်လျှင်ဒီစမ်းသပ်မှုအကဲဖြတ်ရန်လို့မရပါဘူး။ မညစ်ညမ်း-သွေးဆောင် ED ကနေပြန်လည်ကောင်းမွန်သို့မဟုတ်မရှိမရှိအကဲဖြတ်ဖို့ရည်ရွယ်အထက်ပါစမ်းသပ်မှုဖြစ်ပါတယ်။ (ကြည့်ရှုပါ ကျွန်ုပ်ပုံမှန်ပြန်ရောက်လာသောအခါမည်သို့သိနိုင်သနည်း။).
ကြုံတွေ့နေရ porn ကို အသုံးပြု. သာ. ကြီးမြတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်လှုပ်ရှားမှု တစ်ဖက်နှင့်အတူထက်
လိင်တံ၏ sensitivity ကိုလျော့ကျလာ
သင်သာတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းစိုက်ထူနေကြသည်, ဒါမှမဟုတ်လုံးဝသာသင်အထွတ်အထိပ်အဖြစ်စိုက်ထူတဲ့အခါ, Ejaculating
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအဖော်အတွက်စိုက်ထူသို့မဟုတ်အကျိုးစီးပွားကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ fantasize ဖို့လိုအပ်နေ
porn ၏အစောပိုင်းကအမျိုးအစားများ "စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းတဲ့" မရှိတော့များမှာ
တစ်ဦးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအဖော် (s) ကိုအတူကျဆင်းနေလိင်စိတ်နိုးထ
အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုကိုအသုံးပြုခြင်းသည်နာတာရှည် ED ကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ “ အလွန်အကျွံတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်း” သို့မဟုတ်“ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှု” တို့သည်မပြုလုပ်ပါ။
အင်တာနက်ကညစ်ညမ်း (သို့မဟုတ်မဟုတ်ဘဲယင်း၏စဉ်ဆက်မပြတ်အသစ်အဆန်း) ၏အကြောင်းအရင်း ရှည်ကြာသော porn-သွေးဆောင် ED ။ အလွန်အကျွံသုတ်ရည်လွှတ်ခြင်းနှင့် "လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပင်ပန်းနွမ်းနယ်" မရှိကြပေ။ ဆီးရောဂါပါရဂူသဘောတူ တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေမဖြစ်စေနိုင်ပါတယ် ရှည်ကြာသော ED ကျန်းမာသောလူငယ်များအတွက်၊ အကယ်၍ လူတစ် ဦး သည်ကြီးလေးသော“ သေခြင်း” ကိုအသုံးမပြုပါကသို့မဟုတ် စိတ်ထိခိုက်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေနည်းစနစ်.
နောက်ထပ်ဒဏ္thာရီတစ်ခုမှာတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းသို့မဟုတ်အော်ဂဇင်စ်သည် testosterone ဟော်မုန်းကိုလျော့နည်းစေပြီးလူအများအားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုကိုဖြစ်စေသည်။ သက်သေအထောက်အထားအားလုံးအရ porn-induced ED သည် testosterone ဟော်မုန်းနည်းနေခြင်းနှင့်လုံးဝမသက်ဆိုင်ကြောင်းဖော်ပြသည်။ (ကြည့်ပါ အော်ဂဇင်, တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေခြင်း, testosterone ဟော်မုန်းအဆင့်ဆင့်အကြားမဆိုကွန်နက်ရှင်?၀ က်ဘ်ဆိုက်အနည်းငယ်တွင်“ အလွန်တရာတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်း” ကြောင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုဖြစ်ပေါ်စေပြီးစာဖတ်သူကိုစည်းရုံးရန်ရှုပ်ထွေးသောဇီဝကမ္မဗေဒကိုဖန်တီးသည်။ ငါဒီတောင်းဆိုမှုများအတွက်ဖြေရှင်း ကျွန်ုပ်၏ ED သည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုကြောင့်ဖြစ်ခြင်းမဟုတ်ပါလား။
အခြားတစ်ဖက်တွင်, တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းနှင့်အော်ဂဇင်တစ်ခုကစားနိုင်ကြောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ် သွယ်ဝိုက် porn- သွေးဆောင် ED အတွက်အခန်းကဏ္။ ။ တိရိစ္ဆာန်များတွင်မကြာခဏသုတ်သင်ရှင်းလင်းခြင်းသည် ဦး နှောက်ပြောင်းလဲမှုများစွာကိုဖြစ်စေပြီး dopamine ကိုတားဆီးပေးသောကြောင့် libido ကိုရက်ပေါင်းများစွာကြာစေသည်။ ပုံမှန်အခြေအနေများတွင်လိင်စိတ်နိုးထမှု (မျိုးစိတ်တစ်ခုစီအတွက်ကွဲပြားခြားနားစွာသတ်မှတ်ထားခြင်း) သည်ယောက်ျားများအားလိင်မှုကိစ္စလုပ်ဆောင်မှုမှထွက်ခွာစေနိုင်သည်။ လိင်အရရောင့်ရဲသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံလွှာအသုံးပြုသူများသည်ညစ်ညမ်းသောယန္တရားအသစ်များသို့ကူးပြောင်းခြင်းသို့မဟုတ်စောင့်ကြည့်ခြင်းအတွက်အချိန်ပိုဖြုန်းခြင်းအားဖြင့်ယင်းတားစီးမှုများကိုကျော်လွှားနိုင်သည်။ လွန်ခဲ့သော“ ငါပြီးပြီ” အချက်ပြမှုများကိုတွန်းလှန်ရန်ညစ်ညမ်းရုပ်ကိုသုံးခြင်းက ဦး တည်နိုင်သည် desensitization, ဒါမှမဟုတ်နောက်ဆုံးမှာ DeltaFosB ၏စုဆောင်းခြင်းနှင့်ဗီဇလုပ်ငန်းထိန်းချုပ်မှုအပြောင်းအလဲများကိုရရှိလာတဲ့။ အင်တာနက်ကညစ်ညမ်း၏ဆွဲဆောင်ခြင်းမရှိဘဲ, မည်မျှယောက်ျားတွေရုံကကြွင်းသောအရာပေးမလဲ ပိုပြီးမြင်ဘို့: မကြာခဏသုက်တစ်ဦးက Hangover စေပါသလား?
ဘယ်လိုလဲ ကွဲပြားခြားနားသောအင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းဖြစ်ပါသည် အတိတ်၏ညစ်ညမ်းကနေယနေ့လော မိမိအအချိန်ဇယားကိုနေ့တိုင်း porn စောင့်ကြည့်ဖို့, ဒါပေမယ့်တိုင်းဆယ်ရက်တစ်ခါသာ masturbate ဖို့ပဲကျနော်တို့မရှိသလောက် masturbated, ဒါပေမယ့်ကိုယ့်အင်တာနက်ကို porn ကိုကြည့်ခြင်းဖြင့်ပညာရေးဖွံ့ဖြိုးပြီးသူတစ်ဦးကျန်းမာနုပျိုယောက်ျား၏ကိုငါသိ၏။ အခြားသူများကနေ့တိုင်း porn မှ edging အားဖြင့်ပညာရေးဖွံ့ဖြိုးသေးသောအသာတိုင်းလအနည်းငယ် ejaculating ပါပြီ။
penile ဆွနှင့်အတူသို့မဟုတ်မရှိဘဲအင်တာနက်ကို porn, dopamine မြင့်တက်စောင့်ရှောက်။ ဆက်လက် highspeed porn ကိုအသုံးပြုခြင်းမဟုတ်ဘဲတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေ, ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်ဘာလဲ သည်းခံစိတ်နှင့်တင်းမာမှုလျှော့ချ ပိုပြီးလှုံ့ဆော်အမျိုးအစားများဖြစ်သည်။ porn ကိုသင်ခွင့်ပြုကားအဘယ်သို့ သင့်ရဲ့သဘာဝကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ satiation ယန္တရားများ override နှင့် masturbate သို့မဟုတ်အစွန်းမှဆက်လက်။
မိမိအရဲ့ buddy သူ့ကိုယ်သူနှိုင်းယှဉ်တစ်ခုမှာကောင်လေး:
ကျွန်ုပ်၏သူငယ်ချင်းသည်တစ်ရက်လျှင် ၁၀-၁၅ ကြိမ်လောက်သာတတ်သည်။ ချဲ့ကားပြောဆိုခြင်းမဟုတ်။ သူ၌ပြင်းထန်သောစွဲလမ်းမှုတစ်ခုရှိသော်လည်း၎င်းသည်ပုံမှန်ဖြစ်သည်ဟုသူထင်သည်။ သူ့မှာအင်တာနက်မသုံးနိုင်တဲ့အတွက်သူဟာဘယ်တော့မှညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကိုမကြည့်တတ်ဘူး။ သူအိပ်ရာထဲမှာဆက်ထားရန်ပြkeepingနာမရှိဘူး။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, ငါ porn ကိုကြည့်ခြင်းမရှိဘဲငါတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေသည့်နောက်ဆုံးသောကာလကိုမအောက်မေ့နိုင်ပါ။ ဒါပေမဲ့တစ်ပတ်ကို 10-15 ကြိမ်လောက်ပဲတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေနိုင်မှာပါ။ ထိုအခါငါခက်ခဲတည်းခိုကြီးမားတဲ့ပြissuesနာများကိုရှိသည်။ အစပိုင်းမှာတော့အဲဒါဟာအာရုံကြောလို့ထင်ခဲ့တယ်၊ ဒါပေမယ့်လိင်နဲ့ပိုပြီးရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ပြီးနောက်မှာတော့ငါဟာငြီးငွေ့စရာကောင်းပြီးငြီးငွေ့စရာကောင်းတယ်လို့အမှန်တကယ်တွေ့ရှိခဲ့တယ်။ မိန်းကလေးကကျွန်တော့်ကိုနက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းစကားပြောပြီးသူမကိုဟုပ်လိုက်ရန်မပြောလျှင်ကျွန်ုပ်သည်လိင်ကိုအလွန်ကောင်းသည်ဟုမယူမှတ်ပါ။ ငါမိန်းမခန္ဓာဗေဒမှအလွန် desensitized ပေါ့။
တင်းကျပ်စွာပြောရလျှင်သင်သည် ED ကိုဖွံ့ဖြိုးရန် porn ကိုကြည့်နေစရာမလိုပါ -
ငါနှင့်အတူငါသိတယ်ငါအွန်လိုင်းမိန်းကလေးများနှင့်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းများကို hypnotized ဖြစ်လုနီးပါးဖြစ်ခဲ့တယ်၊ ငါအိပ်ရာပေါ်မှာအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်ရမဲ့မိန်းကလေးတွေကငါ့ကိုစွန့်ပစ်လိုက်ပြီးငါမဖျော်နိုင်ဘူး။ ငါ porn အကြောင်းတောင်ပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူး၊ ငါ porn မသုံးပေမယ့်အွန်လိုင်းပေါ်ကအမျိုးသမီးတွေရဲ့အဝတ်အစားတွေကိုကြည့်နေတုန်းပဲ။ ဒီမှာကတခြားသူတွေလိုပဲကျွန်မအကြိမ်များစွာပြန်မလာနိုင်ခဲ့ဘူး။ ငါကိုယ်တိုင်ထင်တာကဒီဟာဟာအားလုံးဖြစ်ဖြစ် (သို့) ဘာမှမရှိဘူး၊ သင်အွန်လိုင်းမှမိန်းကလေးများကိုထပ်မံကြည့်ရှုမည်ဆိုလျှင်သင်ပြန်ကောင်းလာမည်မဟုတ်သော်လည်းသင်၏ reboot နှေးကွေးသွားသည်မှာသေချာသည်။ ငါထပ်တူထပ်မျှစဉ်းစားမိသည်မှာကျွန်ုပ်သည်တခါတရံနည်းနည်းလေးကြည့်လိုက်လျှင်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်ကိုတဖြည်းဖြည်းနှင့်ပြန်လည်ပြုပြင်နိုင်လိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်သည်။
ပြီးခဲ့သည့် 20 နှစ်များတွင်ကျွန်မတစ်နေ့တစ်ကြိမ်ထက်ပိုပြီးပျမ်းမျှ masturbate လေ့ရှိတယ်။ ငါ porn သို့ဘယ်တော့မှဖြစ်ခဲ့သည်။ ထိုအသေး, သင်တို့ကိုငါယောက်ျားတွေပြုပါသမျှသောလက္ခဏာများကြုံတွေ့ရပါသည်။
ပြproblemနာကမင်းရဲ့လိင်တံထဲမှာမပါဘူး Viagra အဆိုပါယိုယွင်းမှုကိုရပ်တန့်မည်မဟုတ် ပြitနာကိုခေတ္တဖုံးကွယ်ထားနိုင်လျှင်ပင်။ PIED အတွက်ဖြေရှင်းနည်းကသင့် ဦး နှောက်ကိုပြန်ဖွင့်ရန်ဖြစ်သည်။ ဖြစ်ပျက်နေသောအရာနှင့် ပတ်သက်၍ စိတ်ပညာရှင်၏ရှင်းပြချက်အတွက်ဤမှကောက်နှုတ်ချက်ဖြစ်သည် ကိုယ်နှိုက်ကလည်းပြောင်းလဲဒါကဦးနှောက် စိတ်ရောဂါ-Norman Doidge ဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။
၁၉၉၀ အလယ်ပိုင်းနှင့်နှောင်းပိုင်းနှောင်းပိုင်းတွင်အင်တာနက်လျင်မြန်စွာကြီးထွားလာပြီးညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများပေါ်ပေါက်လာသည့်အခါကျွန်ုပ်သည်လူတိုင်းကိုအခြေခံအားဖြင့်တူညီသောဇာတ်လမ်းတူလူများကိုကုသခြင်းသို့မဟုတ်အကဲဖြတ်ခြင်းပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ... သူတို့ကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမိတ်ဖက်များ၊ အိမ်ထောင်ဖက်များသို့မဟုတ်မိန်းကလေးများကသူတို့ကိုလှုံ့ဆော်မှုကိုဆွဲဆောင်မှုအဖြစ်သတ်မှတ်ဆဲဖြစ်သော်လည်းသူတို့ရဲ့လိင်ဆက်ဆံခြင်းကိုခံရဖို့အခက်အခဲပိုများလာသည်ဟုအစီရင်ခံခဲ့သည်။ ဒီဖြစ်စဉ်ဟာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေကြည့်ရှုခြင်းနဲ့ဘယ်လိုဆက်စပ်မှုရှိသလဲလို့ငါမေးတဲ့အခါသူတို့ကလိင်ကိစ္စမှာပိုပြီးစိတ်လှုပ်ရှားဖို့ကန ဦး ကူညီပေးခဲ့ကြပေမယ့်အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှဆန့်ကျင်ဘက်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိခဲ့တယ်လို့သူတို့ကဖြေခဲ့တယ်။ အခုဆိုရင်အိပ်ရာထဲမှာအိပ်နေခြင်းကိုခံစားဖို့အာရုံကိုအသုံးမပြုဘဲလက်ရှိလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေနဲ့အတူချစ်ခြင်းမေတ္တာကသူတို့ဟာညစ်ညမ်းဇာတ်ညွှန်းရဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းစိတ်ကူးယဉ်ဖို့ပိုပိုပြီးတောင်းဆိုလာခဲ့တယ်။
အမျိုးသမီးလိင် drive ကိုလူတို့ / စေဆုံးရှုံးမှုအတွက် ED ဖြစ်စေတဲ့ porn
ငါအမျိုးသမီးဖြစ်ကြောင်းကိုနဲ့ကျွန်မ porn လူအပေါင်းတို့သည်အချိန်ကိုစောင့်ကြည့်လေ့ရှိတယ်။ အဓိကအားဖြင့်ငါ့ရည်းစားပထမဦးဆုံးအညစ်ညမ်းစောင့်ကြည့်စရာမလိုဘဲဖွင်ရနိုင်ဘူးလို့ပဲ။ ဒါကြောင့်သူကငါ့ကိုငါပထမဦးဆုံး porn ကိုကြည့်ပြီးတော့လိင်ဆက်ဆံသို့မဟုတ် masturbating မပါဘဲဖွင်ရနိုင်ဘူး him.For အချိန်ကြာမြင့်စွာအတူကစောင့်ကြည့်ခဲ့ရတယ်။ ခဏတစ်နောက်မှငါညစ်ညမ်းခြင်းမရှိဘဲမှာအားလုံးဖွင်ရနိုင်ဘူးငါသော်လည်းမလိင်ကနေငါ masturbated တဲ့အခါမှသာတစ်ဦးအော်ဂဇင်မရနိုင်ဘူး။ ငါလိင်ကနေအမျိုးသမီးမိတ်ဆွေတွေနဲ့သူတို့ထဲကအချို့အော်ဂဇင်မရနိုင်စေရန်စကားပြောခဲ့ကြပေမယ့်သူတို့က porn စောင့်ကြည့်သည့်အခါသူတို့လို့ရတယ်။ ဒါကြောင့်ဒီအသာလည်းမိန်းမကိုထိခိုက်ယောက်ျားတွေမထိခိုက်ပါဘူး။
သင်တစ်ဦးသည်ဗီဒီယိုကြိုက်တတ်တဲ့လျှင်, YBOP PIED တင်ဆက်မှုကိုကြည့် ဒီကနေ အဆိုပါ 41:00 အမှတ်အသားအထိ။ PIED ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွင်ယန္တရား ၃ ခုပါ ၀ င်နိုင်သည်။ အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်စေသလဲ? လက်တွေ့အစီရင်ခံစာများနှင့်အတူတစ်ဦးကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း, 2016)
အေးစက်သင့်ရဲ့ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုနှင့်ဆက်စပ်အရာအားလုံးကိုရန်သင့်လိင်စိတ်နိုးထ template ။ ဤသည်ညစ်ညမ်း-သွေးဆောင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်၏အဓိကအကြောင်းရင်းဖြစ်ပါတယ်။
ဆုချီးမြှင့်မှုစနစ်အတွက် dopamine & opioid အချက်ပြခြင်း၏စည်းမျဉ်းကိုပိတ်ခြင်း (mesolimbic dopamine လမ်းကြောင်း)
စိုက်ထူထိန်းချုပ်သော hypothalamus (ဆိုလိုသည်မှာ medial preoptic ဧရိယာ, paraventricular နျူကလိယ) ၏ ALTER ဒေသများ
နာတာရှည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံအသုံးပြုမှုသည်လူတစ် ဦး အားသူတို့၏ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများနှင့်ဆက်စပ်သည့်အရာအားလုံးကိုနှိုးဆွပေးနိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့် - voyeur ၏အနေအထားတွင်ရှိနေခြင်း၊ စဉ်ဆက်မပြတ်ရှာဖွေခြင်းနှင့်ရှာဖွေ; ဝတ္ထု "လိင်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ" ၏အဆုံးမဲ့ချီတက်ပွဲလိုသော; လိင်မှုနှိုးဆွမှုကိုထိန်းသိမ်းရန်ဗီဒီယိုမှဗီဒီယိုသို့နှိပ်ခြင်း၊ သို့မဟုတ်အဆုံးသတ်ဘယ်တော့မှမစာရင်း porn-သွေးဆောင် fetishes အသုံးပြုသူများကသတင်းပို့သည်။ porn-သွေးဆောင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအေးစက်လည်းအဖြစ်ထင်ရှားစွာပြနိုင်ပါတယ် အမျိုးအစားများမှတင်းမာမှုလျှော့ချ မကိုက်ညီဘူး သင်၏မူရင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအရသာ.
အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုဖြင့်သင်၏လိင်စိတ်နှိုးဆွမှုကိုသင်ကလစ် (သို့) လက်ချောင်းဖြင့်ပွတ်ဆွဲခြင်းဖြင့်ထိန်းချုပ်နိုင်သည်။ သို့သော်ဤအရာသည်လိင်ဆိုင်ရာတွေ့ဆုံမှုနှင့်မကိုက်ညီပါ။ အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းမှုနှင့်တကယ့်လိင်အကျင့်စရိုက်များအကြားကွာဟမှုသည် PIED တွင်ကြီးမားသောအခန်းကဏ္ plays မှပါ ၀ င်သည်။ စစ်မှန်သောလိင်သည်ထိတွေ့ခြင်း၊ ထိခြင်းခံရခြင်း၊ အနံ့ခံခြင်း၊ လူတစ် ဦး နှင့်ဆက်သွယ်ခြင်းနှင့်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်ခြင်းဖြစ်သည်။ အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုသည် 2-D voyeurism ဖြစ်သည်၊ mouse ကိုနှိပ်ခြင်း၊ ရှာဖွေခြင်း၊ tabs မျိုးစုံပြုလုပ်သည်။ သင်၏လက်နှင့်သာအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်သည်။ အားကစားတစ်ခုနဲ့နှိုင်းယှဉ်မယ်ဆိုရင်ဘယ်ဖြစ်ရပ်ကသင့် ဦး နှောက်ကိုလေ့ကျင့်ပေးနေသလဲ။ နှစ်ပေါင်းများစွာအင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုကိုအသုံးပြုခြင်းသည်သင်၏ ဦး နှောက်မျှော်လင့်ထားသည့်အရာနှင့်အမှန်တကယ်လိင်မှုကိစ္စတွင်အမှန်တကယ်ကြုံတွေ့နေရသောအရာများနှင့်မကိုက်ညီသည်ကိုဖန်တီးနိုင်သည်။ မျှော်လင့်ချက်များမပြည့်မီပါက dopamine ကျဆင်းသွားပြီး၊
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအေးစက်နဲ့စွဲနှစ်ဦးစလုံး အဆိုပါဝေမျှ တူညီတဲ့ ထဲမှာဖြစ်ပေါ် key ကိုဦးနှောက်ပြောင်းလဲမှု, တူညီတဲ့ ကအစပျိုးသောဖွဲ့စည်းပုံ, တူညီတဲ့ ဇီဝ signal ကို။ ဦးနှောက်အပြောင်းအလဲ '' ဟုချေါသညျာင်း'' (ဒါပေမယ့်အပြည့်အဝလွင့်နေတဲ့စွဲလမ်းမှုမှာ ဦး နှောက်အပြောင်းအလဲများလည်းပါ ၀ င်တယ်) '' ညစ်ညမ်းသောအနုပညာလက်ရာများကဲ့သို့သောကြီးမားသောဆုလာဘ်နှင့်ဆက်စပ်သောအမြင်များ၊ အသံများ၊ အနံ့များ၊ ခံစားချက်များ၊ စိတ်လှုပ်ရှားမှုများနှင့်အမှတ်တရများကိုအတူတကွပေါင်းစပ်လိုက်သောအခါ ဦး နှောက်သည်အနာဂတ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆုလာဘ်စင်တာကိုလွင့်စင်သွားစေနိုင်သောအာရုံကြောလမ်းကြောင်းများကိုဖန်တီးပေးသည်။ အချက်များသို့မဟုတ်အစပျိုးခြင်းများက activated သောအခါ, ဒီလမ်းကြောင်းအစွမ်းထက်, လျစ်လျူရှုရန်ခဲယဉ်း, ဖန်တီးပေးပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဖော်ပြချက်အပြည့်အစုံ - အဘယ်ကြောင့်ငါတစ်ဦးကအဖော်သန်း Porn ပိုစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကိုရှာပါသလား? porn အသုံးပြုသူများသည်အတွက်ာင်းအစီရင်ခံ (လေ့လာရေး: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21.)
ဆယ်ကျော်သက် ဦး နှောက်
ဆယ်ကျော်သက် ဦး နှောက်၏အဓိကအလုပ်တစ်ခုမှာလိင်အကြောင်းလေ့လာရန်ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ ဤလိင်သဘာဝသည်အင်တာနက် porn ကိုအဓိကအားဖြင့်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းဖြစ်ပါက၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေ့ဆုံမှုများ၌ ဦး နှောက်သည်တွေ့ကြုံခံစားရန်မျှော်လင့်ထားသည့်အတိုင်းဖြစ်သည်။ တကယ့်မိတ်ဖက်များနှင့်ဆက်သွယ်ခြင်းမပြုမီမိမိ၏လိင်မှုဆိုင်ရာတုန့်ပြန်မှုကိုအင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုသို့ဆက်သွယ်ခြင်း (porn နှင့်အတူအစောပိုင်းမှ စတင်.) လူငယ်များအတွက်ရှည်လျားသော reboot များအတွက်အဓိကအချက်ဖြစ်သည်။ ဖြစ်နိုင်တယ် ဒီကံဆိုးလမ်းကြောင်းသစ် ၏သဘာဝရလဒ်ဖြစ်ပါသည် အလွန်အမင်းပျော့ဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုဦးနှောက် highspeed (ဆိုလိုသည်မှာ hyperstimulating) porn နှင့်အတူတိုက်မိ။ မကြာမီကသုတေသနသိပ္ပံပညာရှင်နို့တိုက်သတ္တဝါငယ်တွေလိင်အခြေအနေနိုင်ပါတယ်နှစ်ဦးစလုံးကိုမည်သို့ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်းနှင့် ထူးခြားတဲ့အားနည်းချက် ဆယ်ကျော်သက်ဦးနှောက်ကဒီအယူအဆထောက်ခံပါတယ်။
စောင့်ကြည့် ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ဦးနှောက် Highspeed အင်တာနက်က Porn (2013) တွေ့ဆုံ - လိင်မှုကိစ္စနှိုးဆွမှုကိုဆယ်ကျော်သက်များနှင့်လိင်ဆက်ဆံသူများအားညစ်ညမ်းစေခြင်းအကြောင်းအသေးစိတ်အတွက်
အောက်ပါရေဒီယိုအစီအစဉ်များက rewiring & escalation ကိုရှင်းပြသည်။ porn, တင်းမာမှု, သည်းခံမှုနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအရသာ morphing (#16 ပြသ) နှင့် porn, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအေးစက်နှင့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ဦးနှောက် (ပြပွဲ #17).
2) ဆုကြေး circuitry desensitization
လိင်မှုကိစ္စပြုခြင်းသည် porn-induced ED အတွက်အဓိက ဦး နှောက်ပြောင်းလဲမှုဖြစ်သော်လည်းအမျိုးသားတစ် ဦး တည်းအနေဖြင့်အမျိုးသားများခံစားနေရသောရောဂါလက္ခဏာများအားလုံးကိုမဖော်ပြနိုင်ပါ။ အသုံးအများဆုံးနှစ်ခုဖြစ်သော်လည်းရှင်းပြရန်ခက်ခဲသော်လည်းနှစ်ခုတွင်နံနက်သစ်သား (ncturnal စိုက်ထူခြင်း) နှင့်ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်မှုများဖြစ်သည်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုမစွန့်ပစ်မီညတွင်ညအချိန်တွင်စိုက်ထူမှုမရှိခြင်းဖြစ်ပွားလေ့ရှိသည်။ မှတ်သားရန်အရေးကြီးသည်မှာဆီးလမ်းကြောင်းအထူးကုများသည်ညဥ့်နက်သည့်စိုက်ထူခြင်းမရှိခြင်းကိုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ED (Organization ED) နှင့်ခွဲခြားရန် (ဥပမာ - သွေးကြောသို့မဟုတ်အာရုံကြောပြproblemsနာများ) ကိုအသုံးပြုလေ့ရှိသည်။
ညစ်ညမ်းသော ED ရောဂါရှိသည့်အမျိုးသားများ၊ နံနက်သစ်သားမပါရှိသည့်လူများကိုအော်ဂဲနစ် ED ရှိခြင်းဟုမမှန်မကန်သတ်မှတ်ခြင်းခံရနိုင်သည်။ ဆနျ့ကငျြ, ယာယီ flatline တွေ့ရှိနိုင်ပါသည် ပြီးနောက် porn အသုံးပြုမှုကိုဖျက်သိမ်းရေး။ ဒါဟာပုံမှန်အားအဖြစ်ကျမဲ့လိင်အင်္ဂါမျှလိင်စိတ်နှင့်စစ်မှန်သောလူတို့အားဆွဲဆောင်မှု၏ဆုံးရှုံးမှုကိုတငျပွ။ နှစ်ဦးစလုံးရောဂါလက္ခဏာတွေတိုက်ရိုက် arousal နဲ့စိုက်ထူတွင်ပါဝင်ပတ်သက်ပိုမိုနက်ရှိုင်းဦးနှောက်ဖွဲ့စည်းပုံပြောင်းလဲမှုများထောက်ပြ။ သုတေသနစိုက်ထူအကျိုးကိုဆားကစ်အတွက်လုံလောက်သော dopamine လိုအပ်ကြောင်းထုတ်ဖော်ပြသ နှင့် ဦး နှောက်၏အထီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစင်တာများ။
လိင်မှုဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒနှင့်စိုက်ထူမှုနှစ်ခုလုံးသည် ဦး နှောက်၏ဆုလာဘ်တိုက်နယ်မှထွက်ပေါ်လာသော dopamine ကြောင့်ဖြစ်သည်။ ထုတ်လုပ်မှုကိုထုတ်လုပ်ရန် dopamine ထုတ်လုပ်သည့်အာရုံကြောဆဲလ်များကဆုချီးမြှင့်သော circuit တွင် hypothalamus ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ (libido) စင်တာများကိုလှုံ့ဆော်ပေးသည်။ ၎င်းသည်ကျောရိုးရှိစိုက်ထူစင်တာများကိုသက်ဝင်စေပြီး၎င်းသည်လိင်အင်္ဂါသို့အာရုံကြောများပို့ပေးသည်။ desensitization နှင့်အတူ ဆုလာဘ် circuitry ယင်းစိုက်ထူကွင်းဆက်အတွက်ရသေးအခြားအားနည်း link ကိုဖြစ်လာသည်။
desensitization, dopamine နဲ့ opioids ကျဆင်းမှုနှင့်အတူအချို့သော dopamine receptors နှင့် opioid receptors လုပ်ပေးအဖြစ်။ ဒါဟာတစ်ဦးချင်းစီအရွက် အပျော်အပါးမှလျော့နည်းထိခိုက်မခံတဲ့နှင့်အမျိုးမျိုးသော dopamine-raising လှုပ်ရှားမှုများ/တ္ထုများအတွက် "ဆာလောင်မွတ်သိပ်" ။ Desensitization သည်မကြာခဏတူညီသော buzz ('သည်းခံမှု') ကိုရရှိရန် ပိုမို၍ ကြီးထွားရန်လှုံ့ဆော်မှုလိုအပ်ကြောင်းဖော်ပြလေ့ရှိသည်။ အချို့သောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံလွှာအသုံးပြုသူများသည်အွန်လိုင်းတွင်အချိန်ပိုကုန်ကြသည်။ အနားယူရန်အတွက်ပြီးပြည့်စုံသောဗွီဒီယိုကိုရှာဖွေခြင်း၊ အနားမယူသည့်အခါစောင့်ကြည့်ခြင်း၊ Desensitization သည်အမျိုးအစားအသစ်များသို့တဖြည်းဖြည်းမြင့်တက်လာခြင်း၊ တစ်ခါတစ်ရံ ပို၍ ခက်ခဲပြီးလူစိမ်းသို့မဟုတ်နှောင့်ယှက်ခြင်းကိုဖြစ်စေနိုင်သည်။
သတိရပါ၊ ထိတ်လန့်ခြင်း၊ အံ့အားသင့်ခြင်း၊ Desensitization အပြည့်အဝလွစွဲ၏ရှေ့မှောက်တွင်မရှိဘဲဖြစ်ပွားနိုင်သည် - ဤ မက်စ် Planck လေ့လာမှု ပင်အလယ်အလတ် porn အသုံးပြုသူများသည်အတွက် desensitization သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ မှတ်ချက်: ယခုရှိပါတယ် porn ကိုအသုံးပြုခြင်း (သည်းခံစိတ်) ၏တင်းမာမှုနှင့်ကိုက်ညီတွေ့ရှိချက်, porn ဖို့လေ့နှင့်ပင်ဆုတ်ခွာလက္ခဏာတွေသတင်းပို့ 50 လေ့လာမှုများကျော် (တွေ့ရှိချက်အစီရင်ခံ porn သုံးစွဲသူများအာရုံကြောလေ့လာမှုများတသမတ်တည်း desensitization: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8။ ) ။
၏ 3) ပြင်ဆင်ခြင်း hypothalamus လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစင်တာများ
hypothalamic လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစင်တာများမှ Neuroplastic ပြောင်းလဲမှုသည်အခြားစွဲလမ်းနှင့်အတူပေါ်ပေါက်ပါဘူး။ nocturnal စိုက်ထူများ (နံနက်သစ်သား) ၏ဆုံးရှုံးမှု hypothalamic စိုက်ထူစင်တာများပြင်းထန် PIED, ဒါမှမဟုတ်နာတာရှည်အနိမ့် libido အတွက်ပြောင်းလဲစေခြင်းငှါအကြံပြုထားသည်။
အားလုံးဆုလာဘ်သို့ intertwine ပေမယ့် ဆားကစ်ထပ်, အသီးအသီးကသဘာဝဆုလာဘ် (အစားအစာ, ရေ, မေတ္တာနှင့်လိင်) က၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ကျိန် ဆို. ပူဇော် Micro-ဆားကစ်ရှိပါတယ်။ porn-သွေးဆောင် ED နှင့်အတူငါအထီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစင်တာများ (သံသယhypothalamusလိင်မှမြှုပ်နှံ) နှင့် limbic ဆားကစ်ကိုလည်းထိခိုက်နေကြသည်။ စိုက်ထူလိုအပ် လုံလောက်သော dopamine ထဲမှာ ဆုလာဘ် circuit ကို နှင့် အ အထီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစင်တာများ။ က overstimulation နှစ်ချ-ထိန်းညှိကြောင်း dopamine အချက်ပြဖြစ်နှင့် rewire ရနိုင်ပါသလား ပင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆားကစ်? reverse လကြာပြီးသောကျန်းမာလူပျိုတို့အတွက် porn-သွေးဆောင် ED, ဤဖွယ်ရှိသည်အကြံပြုထားသည်။
"hypothalamus ယူဆချက်" အတွက်နောက်ထပ်အထောက်အပံ့ကိုက အမျိုးသားများအတွက် ၂၀၁၂ fMRI လေ့လာမှု“ psychogenic ED ။ ” psychogenic နှင့်အတူသူများသည်အကျိုးကိုစင်တာကျုံ့ (နျူကလိယ accumbens) နှင့် hypothalamus အတွင်းအထီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစင်တာများရှိခဲ့ပါတယ်။
အောင်မြင်စွာအကြံပြု recover သူကိုယောက်ျားတွေဘယျသို့ပွု?
porn-induced ED ဆိုတာဘာလဲဆိုတာအမြဲတမ်းသတိရပါ။ သင်၏သမိုင်း၊ ရောဂါလက္ခဏာများနှင့်လက်ရှိအခြေအနေများအရသင့်အတွက်မှန်ကန်မှုကိုသင်ဆုံးဖြတ်ရမည်။ သင့်ရဲ့ချဉ်းကပ်မှုအတွက်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ် Be ။ အဓိကအကြံပြုချက်နှစ်ခု
သို့မဟုတ်ပါကအခြားသောလမ်းထားရန်, အားလုံးဖယ်ရှားပစ် ပကတိမဟုတ်လူလုပ်သော လိင်ဆွ။
ဆိုလိုတာကတော့ပစ်ဇယ်တွေ၊ အသံနဲ့စာပေတွေကိုငါဆိုလိုတယ်။ Facebook နှင့်ချိန်းတွေ့သည့်ဆိုက်များ၊ Craigslist၊ အတွင်းခံကြော်ငြာများ၊ YouTube ဗီဒီယိုများ၊ “ ထူးခြားသောစာပေများ” စသည်တို့ဖြင့်ညစ်ညမ်းသောအစားထိုးပစ္စည်းများကိုခွင့်မပြုပါ။ သင့် ဦး နှောက်ကို ၀ တ္ထုကိုလှုံ့ဆော်ရန်လိုအပ်သည့်အပြုအမူများကိုသင်တုပနေခြင်းရှိ၊ ကြည့်ပါ - ငါသည်ငါ့ reboot ကာလအတွင်းအဘယ်အရာကိုလှုံ့ဆော်မှုကိုရှောင်ကြဉ်ရပါမည်နည်း
၎င်းသည်လူတိုင်းကိုသက်သာစေသော်လည်း၎င်းသည်လိင်မှုအတွေ့အကြုံနည်းပါးသောသို့မဟုတ်လုံးဝမပါ ၀ င်သောလူငယ်များအတွက်အဓိကအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်“ ဝါသနာပါရန်” လိင်ဆက်ဆံရန်လိုအပ်သည်ဟုမဆိုလိုပါ။ တကယ်တော့တစ်ယောက်ယောက်ကိုတဖြည်းဖြည်းသိကျွမ်းလာတာကအကောင်းဆုံးလမ်းကြောင်းပဲ။ လိင်စိတ်နှိုးဆွခြင်းနှင့်ချစ်ခင်တွယ်တာသူကိုအမှန်တကယ်လူတစ် ဦး နှင့်ချိတ်ဆက်ရန်သင်ဘာလုပ်နိုင်သည်ဖြစ်စေ၊ တစ်ယောက်ပြောခဲ့တယ် ပြန်လည်ကောင်းမွန်သူကိုနုပျိုကောင်လေး PIED ထံမှ:
Rewiring ညစ်ညမ်းရှောင်ရှားအဖြစ်နည်းတူအရေးကြီးပါသည်။ ဒါဟာဝေးအော်ဂဇင်ကနေအချိန်အပိုင်းအခြားအချို့ပမာဏကိုလိုအပ်ကြောင်းပေါ်လာသည်နေစဉ်, ဒီနံပါတ်ကိုလူအများစုကထင်သကဲ့သို့အကြီးမဟုတ်ပါဘူး။
ခင်ဗျားမြင်ရတဲ့အတိုင်းအတာတစ်ခုကလူတွေက reboot လုပ်ပြီးဖြေရှင်းရမယ့်အပိုင်းနှစ်ပိုင်းနဲ့တူတယ် - reboot, THEN rewire ။ အဲဒါမဟုတ်ဘူး။ သင်လိုချင်သောအချိန်တိုင်းတွင် rewiring စတင်နိုင်သည်။ rewiring လုပ်လေလေ ED ကိုပျောက်ကင်းလေလေဖြစ်သည်။ ယောက်ျားအချို့သည် rewiring ပုံစံတစ်ခုအဖြစ်လိင်အကြောင်းစိတ်ကူးယဉ်ခြင်းကိုအောင်မြင်စွာလုပ်ကိုင်နိုင်ခဲ့သည်။ ယောက်ျားတစ်ယောက်သည်သူ၏ခေါင်းအုံးသည်သူ့ရည်းစားဖြစ်သည်ဟုပင်ဟန်ဆောင်ခဲ့သည်။ အောက်ပါတို့ကိုကြည့်ပါ။
အော်ဂဇင်ဖြစ်ပေါ်စေပေမယ့်လိင်, အကျိုးရှိသောနိုင်ပါတယ် မတရားသော။ အခြားသူများကိုသုတ်ရည်လွှတ်အတွက်ရောထွေးနေချိန်တွင်အချို့ကယောက်ျားတွေမရှိသုတ်ရည်လွှတ်နဲ့အတူနူးညံ့သိမ်မွေ့လိင်ဆက်ဆံမှုအကြံပြုအပ်ပါသည်။ သငျသညျ ED ရှိသည်နှင့်မှန်မှန် orgasm ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့လျှင်, ယောက်ျားတွေအော်ဂဇင်ကနေကြားနေဘယ်မှာအကောင့်ကို restart လုပ်ဖို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမနှိုင်းယှဉ်ပါနဲ့။ သင်တစ်ဦးအဖော်နှင့်အတူလိင် reboot နှင့်ရှိသည်ဖို့ကြိုးစားနေနေတယ်ဆိုရင်အောက်ပါအမေးအဖြေများကိုတွေ့မြင်:
အတိုချုပ်အဖြေ - ဒီတစ်ခုကိုသင်ကိုယ်တိုင်တွက်ထုတ်ဖို့လိုတယ်။ ယုတ္တိဗေဒအရသင်သည် erectile ကျန်းမာရေးပြန်လည်ရရှိရန်အတွက်သင် porn ကိုသာဖယ်ရှားရန်လိုအပ်သည်။ ညစ်ညမ်းသော ED မှရောဂါကူးစက်ခံထားရသောအမျိုးသားများစွာက - နှင့်အကောင့်ကို restart posted - ယာယီ တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေဖျက်သိမ်းနှင့်အကြီးအကျယ် (တောင်ဖက်နှင့်အတူ) orgasm ၏ကြိမ်နှုန်းလျှော့ချ။
ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုစွဲလမ်းသူနှင့်အမျိုးသားများကယာယီလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတားမြစ်သည့်သမိုင်းကြောင်းလည်းရှိသည် လိင်စွဲလမ်းရာမှပြန်လည်နာလန်ထူ။ အချို့ကရက် ၉၀ ကိုအကြံပြုကြသည်။ ရက်ပေါင်း ၉၀ အတွင်းလိင်မဆက်ဆံရဟု ?? Terry Crews မှလိင်အစာရှောင်ခြင်းအပိုင်း ၁။ လူအမြား reboot ယာယီအချိန်ကုန်သူတို့ရဲ့လိင်စိတ်နိုးထ template ကို reset ကူညီပေးသည်ကြောင်းပြောဆိုကြသည်။
ဒါဟာဆက်လက်သောသူယောက်ျားဖြစ်နိုင်ပါတယ် မှန်မှန် သူတို့ရဲ့ပြန်လည်နာလန်ထူတိုးတက်မှုဟာသူတို့ရဲ့မရှိခြင်းမှာစိတ်ပျက်ဖြစ်လာစေရန်နှင့်အရှုံးမပေးစဉ်အတွင်း masturbate နှင့်အော်ဂဇင်။ ဒီတစ်ခါလည်းသုတ်ရည်လွှတ် မတရားသော induces နောက်ကျော porn Bing သို့သူတို့ကိုငါမပို့။ ကျနော်တို့ကသူတို့ဆက်လက်တဲ့သူတွေကိုအပေါ်အနည်းငယ်သာဒေတာများကတည်းက သုတ်ရည်လွှတ်၏ယခင်နှုန်းသည်ကျနော်တို့သာရှိသည်အောင်မြင်မှုပုံပြင်များသတင်းပို့လို့ရပါတယ်။
Key ကိုအမှတ် 1: ကျွန်ုပ်တို့၏သတင်းအချက်အလက်အကောင့်ကို restart posted တဲ့သူတွေမှလာ။ ပုံမှန်အော်ဂဇင်ဆက်လက်နေချိန်မှာအလွယ်တကူ recover သူအများအပြားယောက်ျားတွေရှိကောင်းရှိနိုင်ပါသည်
Key ကိုအမှတ် 2: ရှည်လျားတဲ့သေချာပေါက်ပိုကောင်းမဟုတ်ပါဘူး, အခါသုတ်ရည်လွှတ်ခြင်းမှ abstinence ဖြည့်စွက်ထံသို့မရောက်ရ။ သငျသညျပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ဖြစ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ အော်ဂဇင်၏ဆိုးကျိုးများကိုစောင့်ကြည့်ပါ။
Key ကိုအမှတ် 3: နောက်ဆုံးမှာ porn-သွေးဆောင် ED နှင့်အတူတချို့ကယောက်ျားတွေ လိုအပ်ချက် အော်ဂဇင်မှ ခုန်-start သူတို့ရဲ့ဦးနှောက်ဟာ reboot သို့မဟုတ်တိုးချဲ့ပြီးနောက်နိုင်ရန်အတွက် flatline.
ကွဲပြားခြားနားသော reboot လမ်းကြောင်း
အဖြစ်မှန်ကတော့ယောက်ျားတချို့သည်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းသို့မဟုတ်လက်တွဲဖော်နှင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်းကိုဆက်လက်ပြုလုပ်ပြီးလျောက်ပတ်သောတိုးတက်မှုကိုပြုလုပ်သည်။ ဒီလူတွေဘာကြောင့်မတူတာလဲ။ အားလုံးနီးပါးအင်တာနက်ပေါ်မှနှောင်းပိုင်းတွင်စတင်ခဲ့ပြီးအင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုမတိုင်မီနှစ်ပေါင်းများစွာလိင်နှင့်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းများကိုစိတ်ကူးယဉ်ခဲ့ကြသည်။ ဥပမာ:
မင်းလိုပဲငါအိမ်ထောင်ပြုတယ် ငါ P နှင့် M စွန့်လွှတ်လိုက်သော်လည်းငါချစ်သောဇနီးနှင့်အတူ O မပေးခဲ့ပါ။ ကျွန်ုပ်သည် reboot တလျှောက်လုံးပုံမှန်လိင်ဆက်ဆံခဲ့သည်။ ငါနေဆဲရုံဒဏ်ငွေအနာရောဂါကိုငြိမ်းစေ။ ငါ ED သို့မဟုတ် PE ခံစားချက်လုံးဝမရှိတော့ဘူး၊ ငါ့လိင်ဘဝကတစ်ချိန်လုံးပိုကောင်းလာတယ်။
ငါ့လမ်းဟာတစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းဖြစ်တယ်လို့ငါဘယ်တော့မှမပြောဘူး။ ငါကငါ့အဘို့အလုပ်လုပ်ခဲ့ကိုငါသိ၏။ တဖန်ငါသည်လည်းငါအမျိုးသမီးတစ် ဦး နှင့်အတူခဏရှောင်ကြဉ်ပါလျှင်ငါမြန်မြန်ဆန်ဆန်ရောဂါပျောက်ကင်းစေခြင်းငှါထင် ... ငါသေချာဘယ်တော့မှလိမ့်မယ်သော်လည်း။ ကျွန်တော့်စိတ်ထဲမှာအဲဒါကိုကျွန်တော်လုပ်ချင်တဲ့အပေးအယူပဲ။ ထိုသို့ကောင်းစွာထွက်အလုပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။
porn-သွေးဆောင် ED ကြည့်ရှုရန်နောက်ထပ်နည်းလမ်း: တခါတရံမှာအနာရောဂါငြိမ်းစရာပဲပြဿနာရဲ့မူလအကြောင်းရင်းဖယ်ရှားခြင်းထက်ပိုမိုပါဝငျသညျ။ သငျသညျသုံးသောနေရာများ၌သင်တို့၏ခြေထောက်ကိုချိုးဖျက်ပါကရိုးရိုးနောက်ထပ်မတော်တဆမှုရှောင်ရှားထက်အနာရောဂါကိုငြိမ်းစေဖို့ပိုကြာပါတယ်။ သင်, သွန်းလေ၏ immobilize, နှင့်အရိုးအားကောင်းနေချိန်အထိကြောင်းခြေထောက်ပေါ်စိတ်ဖိစီးမှုမထားရန်လိုအပ်သည်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအဆက်အသွယ်သည်ကြီးပေမယ့်သုတ်ရည်လွှတ်အထူးသဖြင့်အစအဦး၌, သင့်ရဲ့တိုးတက်မှုကိုနှေးကွေးစေနိုင်ပါတယ်။
နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ပါ - ခြေထောက်သည်ပိုကောင်းလာသည်နှင့်ဘောလုံးဘောလုံးကိုကစားခြင်းဖြင့်မစမ်းသပ်ပါနှင့်။ တနည်းအားဖြင့်လပေါင်းများစွာ rebooting ပြီးနောက်, အော်ဂဲနစ်တတန်း၌ရှိခြင်း, နိုင် သငျသညျကိုပြန်ထားကြ၏။ သုတ်ရည်လွှတ်သို့ဖြေလျှော့။ သငျသညျ OK ကို functioning ခံရနိုင်ပေမဲ့အများစုကယောက်ျားတွေစိုက်ထူပြန်လာပြီးနောက်ဆက်လက်တိုးတက်မှုသတင်းပို့ပါ။
ဘာလို့လဲဆိုတော့ ED ကိုတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုအငြင်းပွားစရာဖြစ်စေတဲ့အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးမှုများသည်ဖိုရမ်များစွာတွင်ဤအနတ္တကိုဖတ်ရှုခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဆိုက်၏အမည်မှာသင်၏ ဦး နှောက်ဖြစ်သည် porn.“ စိတ်ရှုပ်ထွေးမှုများဖြစ်ပေါ်လာသည် - (၁) ဤမျိုးဆက်သည်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းနှင့်ညစ်ညမ်းမှုကိုအသုံးပြုခြင်းသည်အဓိပ္ပာယ်တူသည်ဟုရှုမြင်သည်၊ လည်း တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်း / အော်ဂဇင်ကိုဖယ်ရှားပေးခြင်း (ယာယီ) ။ ဒါဟာတကယ့်ကိုရိုးရှင်းပါတယ်။ ပုံမှန်နည်းသူတစ် ဦး masturbation အစီအစဉ်ကိုဆက်လုပ်နေတုန်းယောက်ျားအနည်းငယ်သည် porn-induced ED ကိုကုသနိုင်သည်။ ကျနော်တို့ကအမြဲတမ်းလူနေမှုပုံစံစတဲ့အဖြစ် abstinence ထောက်ခံကြဘူး။ မှတ်ချက်: တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေခြင်းမှရှောင်ကြဉ်သောသူသည်စိတ်ကိုလွှမ်းမိုး compulsive ရောဂါသို့မဟုတ် OCD သဘောထားတွေနဲ့အတူသူများသည်တိုးမြှင့်လက္ခဏာတွေတွေ့ကြုံခံစားစေနိုင်သည်။ တောင်မှယာယီ abstinence သင်တို့အဘို့ဖြစ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
နောက်ဆုံးသင်လုပ်ချင်တာက“ စအို” ဖြစ်လာခြင်းဖြင့်သင်ဘယ်တော့မှညစ်ညမ်းသောရုပ်ကိုစွန့်လွှတ်ရန်မကြိုးစားပါ။ ဒီချည်ပေါ်စစ်ဆေးပါ အဆိုပါ orgasm Rebootတစ်ဦးအပေါ်, ဤချည် တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေန်းကျင်ဖွံ့ဖြိုးခံရအစွန်းရောက်ကျန်းမာရေးနဲ့မညီညွတ်တဲ့ဖြစ်ခြင်း။ အဆိုပါနှစ်ဦးစလုံးဟာ Thread ထဲကနေပယ်ရှားတော်မူသူတို့ပြန်ဖွင့်အားလုံးသို့မဟုတ်အဘယ်သူအားမျှကြောင်းယုံကြည်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ယောက်ျားတွေကြိုးစားနေဖြတ်သောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ ဤသည်ပြီးပြည့်စုံသောဒဏ်ဍာရီဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျကျော porn အသုံးပြုမှုထဲသို့ကျလျှင်, သင်အားလုံးသင့်ရဲ့အကျိုးအမြတ်ကိုဆုံးရှုံးကြပြီမဟုတ်။ ရိုးရှင်းစွာအပြန်ဖြစ်စဉ်ကိုစတင်ဖို့။
ကို restart နှင့်သင့်ဦးနှောက် rewiring သော့ဖြစ်ဟန်သော်လည်းကိုလည်းအထောက်အကူဖြစ်နိုင်သည် လိင်တံထဲမှာစီးဆင်းသွေးနှင့်နိုက်ထရစ်အောက်ဆိုဒ်ကိုစောင့်ရှောက်။ ဤသူ၏ဆီးလမ်းကြောင်းအထူးကုအကြံပြုချက်မှာ -
ဒါဟာသူတို့တစ်တွေ prostectomy ခဲ့ကြသူလူနာပေးတူညီတဲ့ protocol ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်းကို Vacuum Erection Device အသုံးပြုခြင်းနှင့် Kegels နှင့် reverse Kegels မှတဆင့်ရရှိနိုင်ပါသည်။ ဤအရာသည် PIED ရှိသူနှင့် ED သွေးကြောဆိုင်ရာပုံစံများအတွက်မည်မျှအရေးကြီးသည်ကိုကျွန်ုပ်မသိပါ၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်၏ဆရာဝန်ကအကြံပြုထားသကဲ့သို့၎င်းသည်ကူညီနေပုံရပါသည်။ သူတို့ကိုအချိန်ကာလတစ်ခုအတွင်းဆေးညွှန်းနည်းဖြင့်သောက်ခြင်းသည်ပုံမှန်အားဖြင့်နိုက်ထရစ်အောက်ဆိုဒ်အောက်ခြေအဆင့်ကိုမြှင့်တင်ရန်အတွက်ပိုမိုအားကောင်းလာစေရန်ကူညီပေးသော်လည်းကျွန်ုပ်ပြင်းပြင်းထန်ထန်အကြံပြုသောအစားအစာနှင့်လေ့ကျင့်ခန်းများမှတစ်ဆင့်လည်းရရှိနိုင်ပါသည်။ [မှတ်ချက် - ED ဆေးများအပေါ်မှီခိုရခြင်း၏ရေရှည်အကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုမူမသတ်မှတ်ရသေးပါ။
အားလုံးဖယ်ရှားပစ် ပကတိမဟုတ်လူလုပ်သော လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှု: စသည်တို့ကို porn, ချက်တင်ခန်း, ခေါ်ဆောင်သွားပုံပြင်များ, ရုပ်ပုံများများအတွက် surfing,
မိတ်ဖက်တစ် ဦး နှင့်အဆက်အသွယ်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။ ၎င်းသည်လိင်ဆက်ဆံမှုပြုရန်မလိုပါ၊ သို့သော်၎င်းမှာမမှားပါ။
orgasm နိုင် အစအဦး၌အဖြစ်စဉ်ကိုနှေးကွေးစေပေမယ့်ဒီအမျိုးစုံ variable တွေကိုပေါ်တွင်မူတည်သည်။
သငျသညျကိုမှန်ကန်မိတ်ဖက်ဖို့ rewire သို့မဟုတ်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေကိုစဉ်းစားရန်လိုအပ်ရှိရာလုပ်ငန်းစဉ်များတွင်တစ်ဦးပွိုင့်ရှိပါတယ်လာသည်။
ကသုတ်ရည်လွှတ်ခြင်းမှ abstinence ဖြည့်စွက်ရန်ကြွလာသောအခါရှည်သေချာပေါက်ပိုကောင်းမဟုတ်ပါဘူး. သင်ပြန်ဖွင့်အတွက်တိုးအဖြစ်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ဖြစ်နဲ့အော်ဂဇင်၏ဆိုးကျိုးများစောင့်ကြည့်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
အပြည့်အဝစိုက်ထူနိုင်သောကျန်းမာရေးကိုပြန်လည်ရရှိရန်မှာ ၂ - ၆ လသို့မဟုတ်ထို့ထက်ပိုကြာနိုင်ပါသည်၊ ထို့ကြောင့်စိတ်ရှည်ပါ။ ပိုမိုသိလိုပါက၊ ဘယ်လောက်ကြာက Porn-သွေးဆောင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်မှထမြောက်ဖို့ယူကြမည်နည်း ယောက်ျားရှည်လျား၎င်းတို့၏ကနဦး reboot ပြီးနောက်ဆက်လက်တိုးတက်မှုအစီရင်ခံတင်ပြကြောင်းသတိပြုပါ။ 2010 ကတည်းကတစ်ဦးစိတ်ပျက်စရာပုံစံထွက်ပေါ်လာပြီသူတို့ masturbating စတင်ကတည်းကအင်တာနက်က porn ကို အသုံးပြု. ခဲ့ကြသူလူငယ်ယောက်ျားတစ်ဦးမဟုတ်တော့ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကာလလိုအပ်လျက်ရှိသည်။ အောက်ပါလင့်ခ်တွင်ကြည့်ပါ:
ရေဒီယို ပြပါ - တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်း - အသက် ၂၅ နှစ်၊ Porn သွေးဆောင် ED၊ ပြန်လည်ထူထောင်ရန် ၉ လ။
ဗီဒီယို: PIED ကနေပြန်လည်ကောင်းမွန်နှင့်သူ၏လိင်ဖော်ထုတ်ထားသူတစ်ဦးလုလင်ကိုအားဖြင့် TEDx ဟောပြောပွဲ
တစ်နည်းအားဖြင့်အမြန်နှုန်းမြင့်အင်တာနက် porn သို့မ ၀ င်မီနှစ်ပေါင်းများစွာအထွတ်အထိပ်သို့ရောက်ခဲ့ကြသောသက်ကြီးရွယ်အိုများသည်ပိုမိုမြန်ဆန်စွာပြန်လည်နာလန်ထူလာသည်။ သက်ကြီးရွယ်အိုများသည်သူတို့၏စိတ်ကူးများကို အသုံးပြု၍ မိန်းကလေးငယ်များနှင့်ဆက်သွယ်ခဲ့ကြသည်။ ဆန့်ကျင်ဘက်အနေဖြင့်ငယ်ရွယ်သောလူငယ်များသည်ကွန်ပျူတာဖန်သားပြင်များနှင့်မည်သည့်အရာနှင့်မဆိုနှစ်ပေါင်းများစွာကြိုးကြိုးတပ်ဆင်ခဲ့ကြသည်။ ညစ်ညမ်းသော ED ရောဂါများနှင့်ပတ်သက်လျှင်စောင့်ဆိုင်းခြင်းနှင့်စောင့်ဆိုင်းခြင်းသည်မလောက်ပေ။ အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းငယ်ရွယ်ယောက်ျားတွေအသွေးအသားလူသားဟာသူတို့ရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆားကစ် rewire ဖို့လိုအပ်လိမ့်မည်။ ဤမကြာခဏမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများသည် reboot လုပ်သူများအတွက်အချိန်များစွာယူရန်အကြံဥာဏ်များစွာရှိသည် - အင်တာနက်ကညစ်ညမ်းအပေါ် Started နှင့်ငါ့ reboot (Erectile အလုပ်မဖြစ်) ရှည်လျားလွန်းတာဖြစ်ပါတယ်.
(၎င်း၏စစ်မှန်သောအကြောင်းမရှိသတိမထားမိဘဲ) မိမိတို့၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတုန့်ပြန်နေတဲ့ကျဆင်းမှုကြုံတွေ့ခဲ့ကြသူအခြို့တို့သညျတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေခြင်းနှင့်ညစ်ညမ်းရှောင်ရှားသူတို့ရဲ့လိင်စိတ်လုံးဝပျောက်ကွယ်သွားစေမည်ကိုစိုးရိမ်ကြသည်။ ဒါဟာ နိုင် ပထမဦးဆုံးမှာပျောက်ကွယ်သွား။ ကပိုကောင်းရရှိသွားတဲ့မတိုင်မီအပြည့်အဝ erectile တန်ခိုးအစွမ်းသတ္တိပြန်လာ၏ဖြစ်စဉ်ကိုမကြာခဏကျဆင်းမှုပါဝငျသညျ။ မြင် ကူညီပါ! ငါ porn ဖြတ်သော်လည်းငါ့အာနိသင်, လိင်အင်္ဂါအရွယ်အစားနှင့် / သို့မဟုတ်လိင်စိတ် (Flat-လိုင်း) လျော့ကျလာနေကြတယ်
သူတို့ရဲ့ဦးနှောက်ချိန်ခွင်လျှာသို့ပြန်လာအဖြစ်သို့သော်လူတွေကဖြစ်လာလေ့ နောက်ထပ် အထိခိုက်မခံနည်း, လိင်တုံ့ပြန်မှုမဟုတ်။ ပြည်သူ့လည်းနည်းနည်းအမှုအရာထိုကဲ့သို့သောအစစ်အမှန်အမျိုးသမီးတစ်ဦးထံမှတစ်ဦးမျှသာအပြုံးသကဲ့သို့ထိုသူတို့ကိုငါဖွင့်သတိထားမိ။ ဒီဖြစ်စဉ်ကိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရာအဟောင်းများကိုဘလော့ဂ်ပို့စ်များ:
အဘယ်သို့ငါ Porn-related Erectile အလုပ်မဖြစ်ထံမှပြန်လည်
နားလည်ရခက်သည်မှာယောက်ျားများသည်သူတို့ Erectile ပြproblemsနာများကြုံတွေ့နေရစဉ်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေတတ်သည်။ လူရှုပ်ရန်တွန်းအားသည်သင်အဝလွန်နေစဉ်အမှိုက်များကိုစားရန်တိုက်တွန်းခြင်းနှင့်ဆင်တူသည်။ ၎င်းသည် ၁) dopamine အချက်ပြမှုလျှော့ချခြင်းကိုစွဲလမ်းစေသောတုံ့ပြန်မှုဖြစ်နိုင်ပြီးသင့်အားစိတ်ကျေနပ်မှုမရှိစေဘဲ ၂) ဆုလာဘ် circuit ကို“ လုပ်ပါ” သတင်းများဖြင့်ထိုးနှက်သည့် sensitized စွဲလမ်းကြောင်းများဖြစ်သည်။ porn-induced ED ပါတဲ့ကောင်လေးတစ်ယောက်မှာ၊ မင်းရဲ့ဆုလိုင်းပတ်လမ်းဟာဒီဟာတွေကစစ်မှန်တဲ့ libido မဟုတ်ဘူး။ ၎င်းသည်မူးယစ်ဆေးစွဲသည့်တွန်းအားဖြစ်သည်။ နှစ်နှင့်ချီ။ သူတို့၏လုံလောက်သောလိင်စိတ်ကိုလျစ်လျူရှုခဲ့သည် (“ လုံလောက်!” ဟုပြသည့်အခါ) ။ အသုံးပြုလိုသည့်ဆန္ဒသည်ညစ်ညမ်းသောညစ်ညမ်းသောလမ်းများကိုပြန်လည်ပြုပြင်ရန်အချက်များကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသည့်တွန်းအားဖြစ်သည်။
စစ်မှန်တဲ့ libido ရှာဖွေတွေ့ရှိပါ
အမှန်တကယ်ဆာလောင်မွတ်သိပ်2နာရီအကြာကကြီးမားတဲ့မုန့်ညက်ကိုလက်စသတ်သောသူတစ်ဦးအဝလွန်သူတစ်ဦးဖြစ်သနည်း အမှတ်ဒါပေမဲ့သူတို့နေဆဲအချိုပွဲအတွက်အခန်းတစ်ခန်းရှိသည်။ သူမရိုင်းဂိမ်း, အခွံမာသီးများနှင့်ရံဖန်ရံခါသီးသာမုဆိုး-ကိုစုသိမ်းအစားအသောက်များတွင်ခဲ့လျှင်ပြင်းထန်စွာအဝလွန်သူတစ်ဦးအဖြစ်အများအပြားကယ်လိုရီကိုစားပေးနိုင်မလား? ဘယ်ဟုတ်မလဲ။ porn အသုံးပြုသူများ superstimulus (အင်တာနက်ညစ်ညမ်း) ကိုဖယ်ရှားခြင်းနှင့်အပြည့်အဝ reboot ဖြတ်သန်းသွားသည့်အခါသူတို့နောက်ဆုံးမှာသူတို့ရဲ့စစ်မှန်တဲ့လိင်စိတ်ရှာဖွေတွေ့ရှိ,
erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုပြန်လည်နာလန်ထူ၏ပထမဦးဆုံးလက်အကောင့်များအတွက်ကြည့်ရှု လင့်များ ဒီမှာ။ မြင် ပြန်ဖွင့် Accounts ကို 's Page များစွာသောကြာကြာပြန်လည်ထူထောင်ရေးပုံပြင်များသည်။ The“အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားPDF စာရွက်စာတမ်းတွင်အသေးအမွှားအစီရင်ခံစာများပါရှိသည်၊ ဤတွင်ဆယ်ရက်ကြာပြန်လည်နာလန်ထူလာသောအခါ“ လုံးဝလိင်ဆိုင်ရာမောင်းနှင်မှုနှင့်စိုက်ထူခြင်းမရှိသော” အခြားယောက်ျားတစ်ယောက်နှင့်ပြန်လည်ကောင်းမွန်လာသည့်လူတစ်ယောက်၏ငိုကြွေးမြည်တမ်းစကားဖြစ်သည်။
ဒါကပုံမှန်ပါပဲ အဲဒီမှာ Hang ။ သငျသညျဖြစ်ကောင်းသင်နားလည်သဘောပေါက်ကြဘူးညဥ့် (နှင့်နံနက်စိုက်ထူ) လာပြီနေကြသည်။ သင်နှိုးစက်တစ်စုံကိုနိုးလျှင်သဘာဝကျကျနှိုးပါ။ ၎င်းသည် REM သံသရာပြီးနောက်သင်နိုးထလာစေရန်သေချာစေပြီးသင်၏ညဥ့်နက်အချိန်တွင်ထင်းကျန်ရှိနေ ဦး မည်ဖြစ်သည်။ ဤအရာသည်သင်၏လိင်တံကိုယုံကြည်မှုအချို့ပြန်လည်ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ သင်လုပ်နိုင်သောအကောင်းဆုံးအရာမှာအချိန်ပေးခြင်းဖြစ်သည်။ သင်၏ခန္ဓာကိုယ်သည်အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်အလိုက်သင့်ပြုပြင်ပြောင်းလဲနိုင်ပြီးနောက်ဆုံးတွင်ဟန်ချက်ညီစေနိုင်သည်။
Porn နှင့်ဆက်နွယ်သော erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု၊ copulatory impotence (ဒီနေ့ညစ်ညမ်းမှုကိုဖော်ထုတ်နိုင်သော်လည်း၊ လက်တွဲဖော်နှင့်မသက်ဆိုင်ပါ) နှင့်နှောင့်နှေးသည့်သုတ်ရည်လွှတ်မှုသည်ပိုမိုများပြားလာပြီး ဦး နှောက်ကိုအကြီးအကျယ်နှိုးဆွခြင်းကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည်။ အင်တာနက်ကညစ်ညမ်းအတွက်မွေးရာပါ။ (ကြည့်ရှုပါ: သူမည်သူမဆိုထဲသို့ရုံဒါကမင်။ ) သို့သော်လူငယ်များတွင်ဤအခြေအနေများသည်“ ပုံမှန်” မဟုတ်ပါ။
ဒီမှာပါ သငျသညျကျောပုံမှန်လာမယ့်ဖြစ်ကြောင်းအရိပ်လက္ခဏာ။ တဦးတည်းကောင်လေးကလည်း,
ငါထင်တာကတော့မင်းရဲ့ပစ္စည်းကိရိယာတွေမှန်မှန်ကန်ကန်အလုပ်လုပ်နိုင်မယ်ဆိုတာကိုတီဗွီမှာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံရိပ်တွေဒါမှမဟုတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံရိပ်တွေကိုမြင်ရတဲ့အခါ၊ မင်း ဦး နှောက်ထဲမှာရောင်နေတယ်လို့ခံစားရတဲ့လက္ခဏာတစ်ခုပါ။ ။
ကျေးဇူးပြုပြီးမှတ်သားထားပါ: ဤနေရာတွင်ပြည်သူ့မကြာခဏသူတို့ရဲ့ erectile ကျန်းမာရေး recover နှင့်မိတ်ဖက်နှင့်အတူကျန်းမာလိင်ရှိနိုင်ပါသည်။ သို့သော်ပြန်လည်နာလန်ထူပြန်အသစ်ကသင့်ဦးနှောက် desensitizing မပါဘဲ porn ကို အသုံးပြု. သွားနိုင်ပါလိမ့်မည်ဟုမဆိုလိုပါ။ တဦးတည်းဖိုရမ်အဖြစ်အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးကဆိုသည်:
ကျွန်တော့်ဇာတ်လမ်းကညစ်ညမ်းတဲ့ ED နဲ့စတင်ခဲ့တယ်။ မိန်းမတစ်ယောက်ထဲကိုပျော့ပျောင်းသွားတာဒါမှမဟုတ်ရာထူးပြောင်းပြီးတဲ့အခါ။ ငါ 3-4 ပတ်ကြာအောင်ပြီးတာနဲ့ငါ့နံနက်နှင့်ကျပန်းစိုက်ထူအလွန်ခဲယဉ်းခြင်းနှင့်မကြာခဏဖြစ်လာသည်။ အရာရာတိုင်းအလုပ်ဖြစ်အောင်သေချာအောင်ကိုယ့်ကိုယ်ကို“ စမ်းသပ်” ရမည်ဟုထင်ခဲ့သည်။ “ စမ်းသပ်စရာမလိုပါ၊ တကယ်လုပ်နေတယ်” ငါကိုယ့်ကိုကိုယ်စမ်းသပ်ပြီးပြန်ပြောပြအဆုံးသတ်ခဲ့သည်။ ပထမ ဦး ဆုံး MO, MOO၊ ထို့နောက်နောက်တစ်ခါထပ်သံသရာလည်ပြန်သည်။
porn အသုံးပြုမှု / ညစ်ညမ်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာများစွဲခြင်းနှင့်နိမ့် arousal ချိတ်ဆက်လေ့လာရေး
တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေ PIED ၏အကြောင်းဖြစ်သနည်း အဘယ်သူမျှမ!
A အနည်းငယ်လိုလားသူ PhD ရဲ့ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံလွှာအသုံးပြုခြင်းသည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြtoနာများကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သောအဖြစ်မှန်ကိုတန်ပြန်ရန်အံ့အားသင့်စရာကောင်းသောစကားတစ်ခွန်းဖြစ်သည်။ သူတို့သည်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းသည်ပုံမှန်အားဖြင့်ကျန်းမာသောလူငယ်များတွင်နာတာရှည် ED ကိုဖြစ်စေသည်ဟုသူတို့ကဆိုကြသည်။ YBOP မှ၎င်းကိုတန်ပြန်ရန်ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ရေးခဲ့သည်။ Sexologists တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေဟာပြဿနာ (2016) Is ဟုဆိုကာခြင်းဖြင့် Porn-သွေးဆောင် ED ငြင်းပယ်
"ရက်ပေါင်း 60 ခွေး!"
(2010) "ငါ Porn-related Erectile အလုပ်မဖြစ်ထံမှပြန်လည်ပုံ"
125 ရက်ပေါင်း (ED)
porn သွေးဆောင် ED Reboot အကြံဉာဏ်
reboot ကောင်လေး PIED အကြောင်းကိုဘုံမေးခွန်းများကိုဖွကွေား
ခံစားချက်ဇယား (ED) နဲ့တစျခုလုံးကို reboot ၏အနှစ်ချုပ်,
ED reverse မှတရားအားထုတ်အသုံးပြုခြင်း
လူငယ်တို့ယောက်ျားများ Porn-သွေးဆောင် ED အကြောင်းထဲကအားဆင့်ဆိုရမည်မှာ